စောချစ်သူ: Window တင်ရာတွင် ဖြစ်ပျက်တတ်သည့် ပြဿနာများကြောင့် မဖြစ်မနေ ပြောင်းလဲပြုပြင်ပေးရမည့် အချက်များနှင့် လိုအပ်သည့် software များ
Kaspersky internet security 2012 တင်ထားတယ်ဆိုရင်တော့ Control Panel >> Action center ကိုနှိပ်ပြီး Change action center settings ကိုနှိပ်ပြီး အဲ့ထဲမှာ ရှိ်တဲ့ အမှန်ခြစ်အားလုံးကို ဖြုတ်ပစ်လိုက်ပြီး OK ပေးလိုက်ပါ။ ဘာကိုမှ အမှန်ခြစ် မထားထားပါနှင့် ပြီးရင် ကျွန်တော် တင်ပေးထားတဲ့ Firewall ဖြစ်တဲ့ ZoneAlarm PRO Firewall 2012 ကို install လုပ်လိုက်ပါ့. ဒီပို့စ်အောက်ဆုံးမှာ ZoneAlarm PRO Firewall 2012 ကို keygen နှင့်ပါ တစ်ခါတည်း တင်ပေးလိုက်ပါတယ်. Keygen သုံးနည်းကို မသိရင် ဆိုက်ရဲ့ ညာဖက်ခြမ်းမှာ video file နဲ့ အသံပါ ထည့်ပြီး သေချာရှင်းပြထားပါတယ်. download လုပ်ပြီး ကြည့်လိုက်ပါ.
ပြီးလျှင် Control Panel >> Action center ထဲက User account control settings ကိုတော့ Default မှာပဲ ထားထားပေးထားပါ. တစ်ခါတစ်ရံမှာ တစ်ချို့က software install လုပ်ရာမှာ လွယ်ကူစေဖို့ never notify ဆိုပြီး အောက်ဆုံးကို ခဏထားထားတတ်ပါတယ်. software လည်း သွင်းပြီးရော Default setting ဖြစ်တဲ့ ဒုတိယလိုင်းမှာ ပြန်ထားထားဖို့ သတိမေ့နေတတ်ပါတယ်. အဲ့တစ်ချက်ကိုတော့ နည်းနည်းလေး သတိထားပေးစေချင်ပါတယ်.
အောက်မှာ window7version အားလုံးနဲ့ စမ်းပြီးပါပြီ. 32 bit ကော 64 bit ကော အဆင်ပြေပါတယ်. မပြေဘူးမလုပ်ပါနဲ့. ကျွန်တော် သုံးနေတဲ့ Loader ပါ . အောက်မှာ Download လုပ်လိုက်ပါ. သူ့ကို apply ပေးပြီးတာနဲ့ ခဏနေပြီးသွားရင် restart တောင်းပါလိမ့်မယ်. အဲ့ဒီ့အခါကျရင် ပေးလိုက်ပါ. ခုနက ပြောထားသလိုပါပဲ. ဒီ loader နဲ့ အဆင်မပြေရင် window update လုပ်ထားပြီးပြီဆိုတာ ၈၀% သေချာပါတယ်. အဲ့အတွက်ကြောင့် အပေါ်က ပြောထားတဲ့အတိုင်း system restore လုပ်ပြီးမှ loader သုံးပြီး activated ဖြစ်အောင် လုပ်ပါ.
Download ယiဂd0ယ ၇ L04dင်r (For All versions) 32 bit & 64 bit
Posted by minchitthu at 11:32